Hampisy hantsana nomerika bebe kokoa eo amin’ny lahy sy ny vavy ity hetran’ny media sosialy ao Ogandà ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2018 12:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, Italiano, македонски, English
Diabem-pihetsiketsehan'ny vondronasan'ny vehivavy tamin'ny Jona 2018 tao Kampala, Ogandà. Saripikan'i Katumba Badru, nahazoana alalana.
Tamin'ny voalohany jolay, nampiditra ny hetra fandoa isan'andro amin'ny fampiasana media sosialy sy ny sehatra fampitan-kafatra i Ogandà, amin'ny filazana fa — araka ny tenin'ny Filoha Museveni — “vokatra rendrarendra” izany media sosialy izany.
Tsy isalasalana fa hampitombo ny hantsana nomerika ho an'ny Ogandey rehetra tsy dia manana loatra ity hetra ity. Fa mbola ho ratsy kokoa ho an'ny vehivavy ny vokany, satria na dia ny fidirana sy ny misera aterineto aza dia efa misedra sakana avo dia avo ny vehivavy.
Araka ny antontanisa avy amin'ny World Wide Web Foundation, ao Ogandà, dia tokotokony ho 22 isanjaton'ny vola miditra ankapobeny isambolana ny vidin'ny data 1GB. Ny firenena ahitana aterineto lafo tahaka ny ao Ogandà sy Mozambika no ahitana isan'ny vehivavy vitsy indrindra an-tserasera. Eo amin'ny sehatry ny renim-paritra, dia vehivavy iray amin'ny sivy ihany eto Afrika no miditra amin'ny aterineto. Ny 37 isanjaton'ny vehivavy nanaovana fakan-kevitra tamin'ny tanàna folo notsongaina teto ambonin'ny tany ihany, ka ao anatin'izany i Kampala, no hita ho misera aterineto raha ampitahaina amin'ny 59 isanjaton'ny lehilahy.
Ny fikarohana nataon'ny Tambajotran'ny Vehivavin'i Ogandà sy ny Web Foundation no manondro fa vokatry ny fahantran'ny vehivavy, maro amin'ny vehivavy Ogandey izay miankina amin'ny vokatry ny fambolena no tsy afa-mividy smartfinday na fehezan-dahatahiry. Ary ireo afa-mividy fitaovana sy tolotra finday indray matetika voasakan'ny fiteny na tsy dia mahay mamaky teny sy manoratra loatra.
Mandray anjara amin'ny hantsana nomerika eo amin'ny lahy sy ny vavy ihany koa ny kolontsaina sy ny fiarahamonina. Misy fitsipika mifikitra mafy dia mafy ao amin'ny fiarahamonina ogandey mahatonga eritreritra miiba na ratsy manoloana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny firotsahany amin'ny sehatra hitam-bahoaka. Miitatra hatrany amin'ny sehatra tahaka ny cafes sy ny telecentres, izay ahitana fidirana amin'ny aterineto vonona, izany sehatra izany. Mandray anjara amin'ny hantsana nomerika eo amin'ny lahy sy ny vavy daholo ihany koa ny fanomezana tombondahiny (ho an'ny lehilahy), araka ny hita amin'ny fandraisana anjara ara-politika sy fisoloantena eo amin'ny rafitra fanapahan-kevitra, sy ny fiparitahan'ny varavarana misokatra ara-toekarena, fahazoana fanabeazana (ary avy amin'izany ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra), ary ny fizaràna asa eo amin'ny toekarena.
Fa na izany aza dia misy ny vehivavy Ogandey no mbola miditra an-tserasera. Ny revolisiona nomerika no manome feo an-tserasera ho an'ny vehivavy Ogandey hirotsaka politika, hiteny ny marina amin'ny fahefana, handrava ny fanjakazakan-dehilahy ray, hitady torohevitra avy amin'ny namany, hiditra vaovao torohay, hifandray amin'ny mpanjifa, hivarotra ny vokatry ny asany, hanomboka fahalalahan-tanana, hanangana vondrom-panohanana ara-tsaina sy ara-piarahamonina ary zavatra hafa maro dia maro. Misy ny zavatra tsy hitan'ny Filoha Museveni raha miteny izy fa natao hifosafosana ny media sosialy. Ary na dia hoe izany aza, filàna fototra mahaolombelona ny fifandraisana (serasera).
Tsy raharahian'ny hetra ihany koa ny fahabangana goavana amin'ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra nomerika, indrindra fa eo amin'ny Ogandey mahantra. Rehefa niantsafa tamin'ny vehivavy monina ao Bwaise, ambanitanànan'i Kampala iray aho, dia avy amin'ireny no nahafantarako fa ny WhatsApp sy ny Facebook no aterineto. Ireo ihany no sehatra hain-dry zareo ny mampiasa azy. Koa amin'ity hetra vaovao ity, dia tsy ho tafiditra miaraka ry zareo.
Raha mba niditra tao anatin'ny fanapahan-kevitry ny Vaomieran'ny Zon'Olombelona tao amin'ny Firenena Mikambana taona 2016 momba ny fampivoarana, fiarovana ary ny fisitrahana ny zon'olombelona amin'ny aterineto moa ny governemantan'i Ogandà, dia ho fantatry ry zareo fa tokony hisokatra ny aterineto. Ny Andininy faha-6 mitady “ny hanotofana ny hantsana nomerika eo amin'ny lahy sy ny vavy sy hanamafisana orina ny fahafahana mampiasa teknolojia, indrindra amin'ny tekonolojian'ny vaovao torohay sy ny fifandraisana, mba hampivoarana ny fanomezana vahana ny vehivavy sy ny zazavavy rehetra.” Ary ny andininy faha-10 manameloka “ireo fepetra fanahy iniana isorohana na hanapahana ny fahazoana mahazo na mampiely ny vaovao torohay an-tserasera izay manitsakitsaka ny lalànan'ny zon'olombelona iraisampirenena, ary miantso ny Fanjakana rehetra mba tsy hanao izany na hampitsahatra ny fampiharana fepetra tahaka izany.”
Nilaza i Museveni fa rendrarendra ny media sosialy ka manan-tsafidy ny olona hampiasa azy na tsia. Ny fihainoana azy milaza fa tena mandratra mihitsy ireo zavatra ireo. Taona 2018 isika izao. Raha miroso mankany amin'ny fahaizana voatr'olombelona izao tontolo izao, mankany amin'ny zava-baovao manodidina ny aterineton'ny zavatra sy ny fahafahana miditra aterineto maimaimpoana eny amin'ny seha-bahoaka, dia mizotra mankany amin'ny lalana mifanohitra amin'izany kosa i Ogandà.
Raha mba mihaino fotoana vetivety monja ny hiakan'ny vahoaka Ogandey — izany nitabataba mafy sy mazava hatramin'ny nampiharana ilay hetra tamin'ny voalohany jolay — moa ny mpikambana amin'ny parlemanta, ireo mpanolotsainan'ny filoha maro dia maro ary ny minisitry ny teknolojiam-baovao, dia efa nofoanany ity hetra ity.